Ugbo ala Super Manway | Ime na Robotic Tank nhicha Ngwọta
Foto niile, vidiyo na ozi dị na ibe a yana websaịtị bụ ihe nwebisiinka na 2020 © nke PRO-LINE HYDRALINK ekwesighi iji ma ọ bụ depụtaghachi ya.
Manway Super Cannon https://youtu.be/qqZL3vliCEs pịa ka lee vidio ahụ
Maka ozi ndị ọzọ email tony@pro-linehydralink.com
Unu niile ndị na-achọ ịrụ ọrụ site n'oge ochie na nke a na-emekarị nke ọma na ndị na-adịghị arụ ọrụ manway cannons enyemaka bụ ebe a. You na-eriju afọ na Manway Cannons gị na-etinye oge ka ukwuu idozi karịa ịrụ ọrụ na ọrụ ha na-arụ. azịza ya dị ugbu a.
“Nke a Super MANWAY CANNON”Ga-eme ka nrọ gị mezuo, tankị gị ga-adị ọcha ma ndị ahịa gị nwee obi ụtọ.
PRO-LINE HYDRALINK SUPER CANNON nwere nkeji 3 dị n'ime ya, nke nwere ihe niile achọrọ iji mee ka SUPER CANON bụrụ ihe ọhụụ, ọkaibe, rụọ ọrụ nke ọma ma nwee ọmarịcha Tank nhicha Manway Cannon Sistem.
Ihe ato bu ihe ndi ozo n’eji eme ihe
Onye na - ejikwa Super Cannon
MRFT ntughari na mkpochapu ihe
Ihe omumu abuo di egwu nke nwere oriọna, igwefoto, ikuku na acho oxygen
Akụkụ ya ma ọ bụ ụlọ elu nwere ihe dị elu
Nchọpụta gas / oxygen
Ahịrịrị maka njem
Ogwe njikwa ike Super Manway
Ihe niile na-arụ ọrụ site na ebe a. All nke SMCRC re-mgbasa tank mgbagha hụrụ ebe a. Ngosipụta pere mpe dị n’azụ ọystụ na-agwa gị ihe injin gị na-eme, ọystụ ahụ bụ maka mmegharị Cannon. N’akụkụ aka ekpe bụ ịkụpu injin gị, kpoo mgbapụta sludge gị, kpoo elu mgbapụta gị dị elu, weghachite weir tank, ihe mkpuchi maka nlele gas / O2 gị.
Manway super egbe ala njikwa
Nrụgide na ebupute nfuli n'ụzọ zuru oke ịrụ ọrụ hydraulic
mana mannon mgbapụta mgbapụta
3 inch nke hydarulic Sludge pump
Ugbo elu na nfuli
Mkpogharị SMRFT na akpa mmiri
Ihe mgbapụta SMRFT
SMRFT dị ala na nnukwu mmetụta na mkpu
Ntughari na ntughari
ọnụnọ nke superCR SMCRC
Oti mkpu na elu na nke ala maka SMCRC
Akwụkwọ ntuziaka na-agba ịnyịnya levers
Congbọ elu ikuku na ngalaba na-achịkwa
Super Manway egbe ala saịtị layout
Maka ozi ọzọn email tony@pro-linehydralink.com
Foto niile, vidiyo na ozi dị na ibe a yana websaịtị bụ ihe nwebisiinka nke 2020 © nke PRO-LINE HYDRALINK ekwesighi iji ya ma ọ bụ depụta ya.